कोरिया तस्वीर खिच्नेहरुका लागि सुन्दर राष्ट्र हो । त्यसैले पनि यहाँ क्यामरा खरिद गर्नु एउटा लाभदायक पक्ष हुनसक्छ । आफ्नै प्रयोगका लागि वा नेपालमा आफन्त वा साथीभाईहरुलाई दिन उपहारका रुपमा क्यामरा किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने कोरियामा क्यामरा खरिद गर्ने केही टिप्सहरु आजको लेखमा दिने प्रयास गरिएको छ । आशा छ यो जानकारी तपाईका लागि उपयोगी हुनेछ ।
१.क्यामरा स्टोर जतापनि सजिलै भेटिन्छ
क्यामरा खरिद गर्न चाहनेहरुका लागि कोरिया स्वर्ग नै हो । विभिन्न ब्राण्ड, मोडल र मूल्यका क्यामरा पाइने यहाँ थुप्रै स्टोरहरु छन् ।योङ्सान आईपार्क मल कोरियामा सबैभन्दा लोकप्रिय स्टोर हो ।योङसान बाहेक कोरियामा अन्य ठाउँमा पनी क्यामेरा सजिलै किन्न सकिन्छ।टाईम्स स्क्वायर,हाईमार्ट,ईमार्ट,लोट्टे मल ,सिन्सेगे मल तथा होमप्लस जस्ता मल हरुमा समेत क्यामेरा उपलब्ध हुन्छ।
२.अंग्रेजी भाषामा सेटिङ
कोरियामा क्यामरा खरिद गर्दा त्यसमा अंग्रेजी भाषामा सेटिङ भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । आधुनिक तथा उच्च गुणस्तरीय क्यामराको सेटिङ बुझ्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने भएकाले सेटिङबारे विचार पुयाउनु पर्छ । कुनै कुनै क्यामरा उत्पादक कम्पनीले कोरियाबाट हुने क्यामराको अनाधिकारीक निर्यात रोक्न अंग्रेजी भाषामा सेटिङ राखेका हुँदैनन् । त्यसैले यसबारे होश पुर्याउनुहोस् ।
३.स्टोरमै क्यामराको जाँच गर्ने
कोरियाका कुनै–कुनै स्टोरमा तपाइले खरिद गर्न चाहेको क्यामरामा आफ्नै मेमोरी हालेर तस्वीर खिचेर त्यसलाई जाँच गर्ने अनुमति पनि दिइन्छ । यसले क्यामरा खरिद गर्नुअघि त्यसले कस्तो तस्वीर खिच्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सहयोग गर्छ । त्यसकारण यो सिष्टमको फाइदा उठाउन सकिन्छ ।
४.ड्युटी फ्रि दाबी
यदि तपाई स्र्ट ट्रम स्टे अर्थात छ महिनाभन्दा कम समयका लागि कोरियामा हुनुहुन्छ भने क्यामरालगायत अन्य इलेक्ट्रोनिक्स सामानमा ड्युटी फ्रि (कर छुट) का लागि दावी गर्न सक्नुहुन्छ ।। यसका लागि क्यामरा खरिद गर्ने स्टोरमा जाँदा पासपोर्ट पनि सँगै लानुपर्छ र ‘खरिदको प्रमाणपत्र’ फारम भर्नुपर्छ । ड्युटी फ्रिका लागि न्यनुतम ५० हजार वोन देखी अधिकतम १० लाख वोनसम्मको खरिदमा ड्युटी फ्रि दाबी गर्न सकिन्छ । क्यामरा किन्दा कोरिया घुम्न आएका साथी वा आफन्तसंग जानु पनि उपयुक्त हुन्छ ।
५.कोरियामा क्यामरा महङ्गो हुन्छ
कोरियामा क्यामरा महङ्गो हुन्छ । त्यसैले यहाँ क्यामरा खरिद गर्नु अघि आफ्नो देशमा यसको मूल्य कति पर्छ भनेर तुलना गर्दा राम्रो हुन्छ । सउलका केही ठाउँमा सस्तो र एक पटक प्रयोग भइसकेका क्यामरा विक्री हुने स्टोर पनि छन् जहाँ यसबारे बुझ्न सकिन्छ ।
६.विश्वव्यापी ग्यारेण्टी छ कि छैन ?
क्यामरा खरिद गर्नुअघि त्यसमा भएको ग्यारेण्टीबारे राम्रो जानकारी हासिल गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसको मतलब क्यामराको ग्यारेण्टीबारे बुझ्न सिधै उत्पादकसँग सम्पर्क गर्न सकिन्छ । प्रमुख उत्पादक कम्पनीसँग विश्वव्यापि ग्यारेण्टी हुन्छ । यो सूचना क्यामरा बक्सको भित्रपट्टि उल्लेख गर्न आवश्यक हुन्छ ।
७.अंग्रेजी भाषीहरुका लागी सहयोग
कोरियाका स्टोरहरुमा अंग्रेजी बोल्ने कर्मचारी पाउन मुस्किल पर्छ ।कोरियाको उपभोक्ता सेवा धेरै नै सहयोगी हुन्छ । कर्मचारीहरुले तपाइले स्टोरमा के खोजिरहनुभएको छ भन्ने कुरा बुझेर तपाइलाई उत्कृष्ट क्यामरा खरिद गर्न सहयोग गर्छन् ।
कोरियामा क्यामरा खरिद गर्दा यी माथि उल्लिखित टिप्सहरु ध्यानमा दिइयो भने खरिद प्रकृया सजिलो हुन्छ । क्यामरा किन्नुअघि क्यामराका विषयमा जानकार व्यक्तिहरुसंग सोधपुछ गर्न र इन्टरनेटमा उपलव्ध हुने रिभ्युहरु पढ्न र हेर्न पनि सक्नुहुन्छ । सम्भव भए क्यामराका विषयमा जानकारी भएका व्यक्तिहरुलाई लिएर स्टोरसम्म जानु पनि उपयुक्त हुन्छ जसले तपाईलाई आवश्यकता अनुसारको क्यामरा खरिद गर्न सहज हुन्छ ।तपाईसंग पनि कोरियामा क्यामरा किन्दाका कुनै अनुभव छन् कि ? वा उल्लेखित वाहेक अरु केही सुझाव छन् कि ? छन् भने तल कमेन्टबक्समा लेख्न नविर्सनुस है । यो जानकारी उपयोगी लागेमा सेयर गरेर सबैमाझ पुर्याउन पनि सहयोग गरिदिनुहोला ।